Isnidaamis - 1177
Waa maxay isnidaamisku?
Waxa badanaa Isnidaamis ku cuncuna gacmaha, xuddunta agteeda, ibta iyo xubnaha taranka.
Isnidaamisku waa cayayaan ku noolaan kara maqaarka gudahiisa. Waxa uu dhererkoodu ka yar yahay nus millimitir. Isnidaamisku waxa uu qodaa maqaarka hoostiisa, halkaas oo uu ukun dhigo. Ma arki kartid cayayaanka, sababtoo ah waxay ku jiraan maqaarka hoostiisa.
Dadku waxa ku dhaca nooc ka duwan isnidaamiska ku dhaca bisadaha iyo eyda.
Sidee ayuu u faafaa isnidaamisku?
Isnidaamiska dadka ku dhaca waxa uu ku faafi karaa taabasho toos ah, maqaarka oo maqaar kale taabta. Waa inaad xiriir maqaarkiisa qof kale la leedahay ilaa 15 daqiiqo ama wax ka badan si loogu qaado isnidaamiska. In isla sariir lagu seexdo ayaa lagu kala qaadaa. Gacan qaadista ama hab siinta ayaan lagu kala qaadi karin.
Waxay qaadataa 4 ilaa 6 todobaad tan iyo marka aad isnidaamiska qaadey ilaa inta uu cuncunku kugu bilaabmaayo. Waxaad dadka kale qaadsiin kartaa kahor inta aanu cuncunku kugu bilaabmin. Ka dib marka la daaweeyo cudurka isnidaamiska ayaan dib danbe cid loo sii qaadsiin karin.
Sidee ayaa lagu dareemaa isnidaamiska?
Isnidaamiska ayaa meelo badan oo jidhka kamid ahi ku cuncuni karaan. Waxa badanaa ku cuncuna gacmaha, xuddunta agteeda, ibta iyo xubnaha taranka. Ma aha wax caadi ah in madaxu uu ku cuncuno.
Waxay badanaa ku cuncuntaa xilliga fiidkii iyo habeenkii.
Goorma iyo xaggee ayaan daryeel caafimaad ka dalbanayaa?
Uma baahnid in dhakhtar ku baaro si loogu ogaado inaad qabto cudurka isnidaamiska. Wakhti ka qabso xarun caafimaad si aad ula kulantid dhakhtar.
Waxaad toos iskaga daaweyn kartaa haddii aad is xoqeyso oo aad xiriir la sameysay qof qaba cudurka isnidaamiska.
Sidee ayaan iskaga daaweeyaa isnidaamiska?
Waxaad isku daaweynaysaa kareem la yiraahdo Tenutex. Waxa laga soo gadan karaa farmasiiyaha, iyadoon aan loo baahneyn warqad dhakhtar qoro.
Si fiican jidhka oo dhan ugu wada dhaq saabuun iyo biyo.
Jidhka oo dhan ku duug kareemka Tenutex, marka laga reebo madaxa. Ha ilaawin inaad mariso hoostaada/xubintaada taranka, faraha dhexdooda iyo suulasha.
U ogolow kareemku inuu maqaarka marsanaado ilaa 24 saacadood. Ha ka qalajin.
Mar labaad dib ugu duug gacmaha mar kasta oo aad gacmaha dhaqdo. Isticmaal galloofis/gacmo gashi caag ah haddii tusaale ahaan, aad u baahan tahay inaad weelka dhaqdo. Kaddibna tuur galoofiska. Kadibna gacmahaaga ku duug Tenutex.
24 saacadood ka dib ayaad jirkaaga si fiican u dhaqeysaa. Dhaq dharka aad isticmaashay oo dhan, go'yaasha iyo shukumaanada/tuwaalada ku dhaq biyo heerkulkoodu yahay 60-digrii. Waxaad sidoo kale dharka dibada ugu wadhi kartaa 3 maalmood. Ha illoobin kabaha iyo gacmo gashiga.
Waxa laga yaabaa inaad u baahato inaad daaweynta mar kale dib ugu sameyso haddii dhakhtarku uu kuu sheego in taas loo baahan yahay.
Dhammaan dadka oo dhan hal mar wada daawee
Haddii aad dad badan oo si wadajir ah meel ugu wada nool tihiin, waa in dadka oo dhan isku mar la wada daaweeyo. Haddii kale waxaa jiri karta khatar ah in mar labaad dib loogu qaado.
Waxay qaadan kartaa dhowr toddobaad ka hor inta cuncunku kaa wada tagaayo. Waxaad maqaarka ku daaweyn kartaa kareem ay ku jirto maadada kortisoonku si cuncunku kaaga yaraado. Waxaad kariimka ka iibsan kartaa farmasiiyaha, iyada oo aan loo baahneyn warqad dhakhtar qoro.